पृथ्वी धेरै तातियो ! अब के होला ? - न्यूज सञ्जाल
लन्डन (बीबीसी) । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको तामक्रम बढ्दै गएको छ। सन् २०१९ को जुलाई अहिलेसम्मकै तातो महिना साबित भएको छ। वैज्ञानिकहरूले विश्वको तापमान औसत १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन चेतावनी दिएका छन्। तीव्र औद्योगिकीकरणका कारण सन् १८५० देखि १९०० को अवधि अत्यधिक तातेको थियो। त्यसयता १ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढिसकेको छ।
त्यसका लागि ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन बढाउनुपर्ने हुन्छ। निम्न-मध्यम स्तरीय मेहनत भएमा जनवरीमा ४.१ र जुलाईमा २.८ सेल्सियस तापक्रम थपिनेछ। उच्च-मध्यम सफलता भएमा जनवरीमा ४.६ र जुलाईमा ३.५ तथा खराब अवस्थामा जनवरीमा ७.६ र जुलाईमा ५.२ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्ने छ। त्यस अवधिमा विश्वको तापमान वृद्धि औसत ३ देखि ५ डिग्री हुनेछ। नीति र व्यवहार परिवर्तन नगरी खराब अवस्थामा गयो भने नेपाल विश्वकै तातो ठाउँ बन्न पनि सक्नेछ।